Ngingawadla yini ukhukhamba omusha notamatisi we-pancreatitis? > Ukudla ngesifo sikashukela
Ngaphandle kwemifino, ukudla komuntu akwanele. Kodwa-ke, ukusebenzisa ukhukhamba omusha notamatisi kwezinye izindlela ze-pancreas kufanele kuqaphele kakhulu.
Ukhukhamba luwusizo kakhulu emzimbeni. Le imifino iqukethe umswakama omningi wemvelo, odingekayo ngamaseli omzimba womuntu. Isimo esiyingqayizivele sejusi yamakhukhamba ukuthi, ngaphezu kokuqukethwe kwamanzi amaningi, iqukethe izinhlobo eziningi kasawoti, amavithamini nezakhi zamaminerali. Ngaphezu kwalokho, lezi zinto ezibalulekile emzimbeni womuntu zisejusi likhukhamba ngokwesilinganiso esifanele. Ukudla ukhukhamba kuyindlela enhle yokuvikela izifo eziningi zesistimu yokugaya ukudla.
Kwezifo ezingama-pancreas ezingamahlalakhona, izimo zivame ukuvela ezihambisana nokwehla kokuxineka kwama-macro- kanye nama-microelements egazini. Kumakhukhamba, kunamaminerali amaningi awusizo adingekayo kumaseli womzimba wethu. Ngakho-ke, kuzo yile:
Zonke lezi zingxenye zifaka isandla ekuthuthukisweni kwezinqubo ezenzeka kumaseli womzimba. Izakhi ezisebenzayo eziqukethwe kumakhukhamba nazo zinomthelela ekwenzeni ngcono izinqubo ze-metabolic. Ukhukhamba uthathwa kufanele njengomkhiqizo wokudla, ngoba aqukethe amakhalori ambalwa kakhulu - 14 kcal ngamagremu ayi-100.
Ngomsebenzi wokugaya ojwayelekile, umzimba udinga i-fiber yokudla. Zitholakala ekudleni okuhlukile, kepha zitholakala ngamanani anele emifino nezithelo. Ukhukhamba futhi ungumthombo we-fiber, okudingekayo ukuze umzimba womuntu wenze ukugaya okujwayelekile. Kodwa-ke, i-fiber kumakhukhamba ayiyona "eyolaka" esakhiweni sayo ngakho-ke ayikwazi ukulimaza izindonga zesisu ezibucayi.
Nge-pancreatitis, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi inani lokudla okugcwele ku-fiber alilikhulu kakhulu. Ukudla inani elikhulu le-fiber yokudla kungaholela ebuhlungwini besisu futhi kubangele izitulo ezivama kakhulu. I-fiber ephezulu kakhulu etholakala kukhukhamba.
Kungakho abantu abahlushwa ama-pathologies ama-pancreas ama-pancreas kumele badle ukhukhamba omusha ngaphandle kwesikhumba. Lokhu kuzosiza ukunciphisa ingozi yokuba nezimpawu ezimbi.
Ukhukhamba aqukethe izinto ezingathinta ukwakheka kwe-bile. Ngakho-ke, ngokusetshenziswa okuhleliwe kwalezi imifino, i-bile iba i-viscous encane. Izinguquko ezinjalo ekwakhekeni kwamakhemikhali nobuningi be-bile secretion zisiza ukunciphisa ingozi yokwakhiwa kwamatshe ahlukahlukene. Ukuchithwa kwe-Bile sekuphelele nakho kuyathuthuka. Ngakho-ke, i-bile, enobuningi obujwayelekile, ingageleza kahle emiseleni ye-bile, esiza ekwenzeni inqubo yokugaya iphelele.
Ukhukhamba yimifino ekwazi ukushintsha izinkomba zokulinganisa kwe-acid emzimbeni. Kwezifo ezingamahlalakhona, lezi zinkomba zivame ukuguqukela ohlangothini lwe-acid. Ukusetshenziswa kwamakhukhamba kunomthelela ekushintsheni kwe-pH yegazi, okuthinta ukusebenza kahle kwesitho somzimba wonke.
Abantu abahlushwa i-pancreatitis engapheli isikhathi eside, qaphela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi baba nobunzima ngezitulo ezijwayelekile. Izifo zepancreas zivame ukuhambisana nokushintshwa kokuphindaphindwa kwesitulo - kungahle kube kaningi ekuqaleni, bese kuthi ukuqunjelwa kuqale ukuvela. Kwezinye izimo, umuntu ophethwe yilesi sifo uguquka ngokushintshana kwesifo sohudo nokuqunjelwa.
Ukujwayeza umsebenzi wamathumbu ku-pancreatitis engapheli kuba nzima kakhulu. Ukwelashwa kokudla kwalesi sifo kukhawulela ukusetshenziswa kwemifino eminingi, ikakhulukazi eluhlaza, lapho kwezinye izimo kukhulisa isimo kuphela. Ukufaka inani elincane lamakhukhamba ekudleni kusiza ukuthuthukisa umsebenzi we-motor wamathumbu amakhulu. Lokhu kusiza ukwenza i-stool isebenze ngokwejwayelekile, futhi kuyindlela enhle yokuqeda ukuqunjelwa.
Utamatisi omusha ungaletha nezinzuzo ezinhle emzimbeni. Le mifino iqukethe inani elikhulu lamavithamini nezinto ezisebenzayo. Ngakho-ke, utamatisi ucebile nge-potassium - into ebalulekile eqinisekisa ukusebenza kwamaseli ngokuphelele. Ukwehla kokuxinaniswa kwe-potassium egazini kuholela ekubonakaleni kwezifo eziyingozi.
Kuqukethe utamatisi kanye nama-carotenoids - izinto ezinamandla ama-antioxidants. Ososayensi bayabona ukuthi ukusebenzisa utamatisi njalo kusiza ukunciphisa ingozi yezifo eziningi. Kukholelwa futhi ukuthi utamatisi unganciphisa ukuthuthukiswa komdlavuza.
Utamatisi futhi ungumthombo wefreyimu yesitshalo. Lapho isisemzimbeni, isiza ekuhlanzeni udonga lwamathumbu lokungcola kokudla.
Ama-acid asemifino aqukethe kule mifino asiza ukuthuthukisa ukugaya, athinte ukucasulwa kwesisu.
Nge-pancreatitis, ama-pancreas aphazamiseka. Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi zonke izinqubo zokugaya ziyaguquka. Umthwalo ngokweqile esithobeni ungavusa ukubukeka kokulimazeka kobuhlungu, okuvame kakhulu ukuba nzima kakhulu nenhlala-kahle yomuntu ogulayo.
Isifo ngasinye sinezimpawu zaso. Ingozi ye-pathology engapheli ukuthi, njengomthetho, iba nezikhathi ezithile zokuwohloka kwenhlala-kahle. Ukwephulwa okunjalo kuvame ukwenzeka ngamaphutha ekunakekelweni kwezempilo okunqunyelwe.
Imifino kufanele ifakwe ekudleni kwansuku zonke kwanoma yimuphi umuntu. Ngaphezu kwalokho, ingxenye yemifino kufanele ifike emisha, eluhlaza. Kulokhu, amangqamuzana omzimba athola inani elanele lama-macro- kanye nama-microelements adingekayo emsebenzini wawo.
I-pancreatitis yisifo esidinga indlela ekhethekile. Abantu abatholakale bephethwe yi-pancreatitis engapheli bayazi ukuthi bazophoqeleka ukulandela ukudla esikhathini sabo sonke sokuphila. Amaphutha ekunakekelweni komzimba kungaholela ekubonakaleni kwezimpawu ezingezinhle futhi kubangele nokwanda okusha.
Ngendlela engapheli yesifo se-pancreatitis, ungasebenzisa ukhukhamba abasha. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe mayelana nobukhulu bokusetshenziswa kwemifino. Akufanele udle ukhukhamba kubantu, ngenxa yobukhona be-pancreatitis, abanomkhuba wezitulo ezihlala njalo. Lapho usebenzisa le imifino, kufanele akhumbule ukuthi i-fiber equkethwe kukhukhamba ikhukhamba ingasheshisa ukuhamba kwamathumbu, okuzoba nomthelela ekubonakala kwesifo sohudo.
I-contraindication ephelele yokuthatha ukhukhamba ubukhona bokungezwani komzimba nokungabekezelelani ngakunye kwalezi imifino. Kulokhu, awukwazi ukudla ukhukhamba, ngoba lokhu kungaholela ekwakhiweni kwezimo eziyingozi kakhulu zomtholampilo lapho kungenzeka ukuthi ukuthuthwa okuphuthumayo esikhungweni sezokwelapha kudingekile.
Utamatisi omusha ungadala ukuhlaselwa kwe-pancreatitis. Ukuze kuncishiswe ingozi yokuba nezimpawu ezimbi, odokotela batusa ukuthi iziguli zabo ezihlushwa ama-pancreatic pathologies ama-pancreatic adle utamatisi kuphela ezimweni ezihlukile.
Kulokhu, qiniseka ukukhumbula inani lemifino esetshenzisiwe.
Futhi, kubantu abahlushwa i-pancreatitis engapheli, kungcono ukhethe utamatisi oselashwe ukwelashwa okushisa. Kodwa-ke, ngemuva kokudla utamatisi ophethwe ukushisa, ubungozi bezinhlungu esiswini sobunxele buye busala. Ukubuyekezwa kwabantu abahlushwa i-pancreatitis kuyahluka. Ngakho-ke, ngemuva kokudla ngisho nenani elincane lamatamatisi amasha, umuntu uba nesifo esiswini kanye nokushiswa kwenhliziyo, futhi umuntu udlulisa le imifino ngokuthula. Ukusabela komzimba emikhiqizweni ehlukahlukene yokudla, kufaka phakathi utamatisi, kuyinto yomuntu ngamunye.
Ngakho-ke, utamatisi awukwazi ukubizwa ngokuthi imifino, ongadli ngokuphephile ngabantu abane-pancreatitis engamahlalakhona. Kungakho Ngaphambi kokufaka imifino enjalo kumenyu, kungcono ukubonana nodokotela kuqala.
Odokotela kumele banikeze indlela yokudla yokwelapha kuzo zonke iziguli ezine-pancreatitis engalapheki. Isimo sayo esiyingqayizivele sisekuthini ukuthi ukudla komuntu kuyashiyana phakathi kokukhula ngokweqile nangezikhathi zokuphila okuhle.
Landela indlela ebekiwe yokudla okwenzelwe ukwelashwa kufanele kube ngokuqinile, ngoba imvamisa amaphutha ekudleni aholela ekubonakaleni kwezimpawu ezingezinhle kanye nokuba inempilo ekhula phambili.
Ukhukhamba - imifino edliwayo, okutshalwe kuyo abantu abake basebenza kusukela ezikhathini zasendulo. Simthanda ngokunambitheka kwakhe okuhle kakhulu, okuhlanganiswa nezakhiwo eziningi eziwusizo. Naphezu kweqiniso lokuthi ikhukhamba lingamanzi angama-95%, ukusetshenziswa kwalo kwansuku zonke kusinikeza usawoti wamaminerali ofanele, kuthuthukisa isifiso sokudla kanye nokufakwa kwezakhi zomzimba emzimbeni wamathumbu.
Ngo pancreatitis oyingozi
Naphezu kwezinzuzo eziningi kangaka, ukhukhamba lungalimaza umuntu ohlushwa yizifo zomgudu wesisu. Iqiniso ngukuthi ngaphezu kokusawoti wamaminerali, amavithamini namanzi, le mifino iqukethe i-fiber coarse, okuyinkimbinkimbi futhi iyingozi ukugaya. Ngakho-ke, kufanelekile ukulahla ukhukhamba ngesikhathi sokukhula kokuvuvukala kwepancreatic.
Ngesikhathi sokuxolelwa, imifino ingafakwa futhi kufanele ifakwe, kepha kancane kancane. Njengoba i-coarse fiber iqukethwe ku-peel, khona-ke ngaphambi kokusetshenziswa, ikhukhamba kufanele ihlanzwe. Kuyadingeka ukwethula imifino kancane kancane, kuqala ngezingxenye ezincane. Ngemuva kwenyanga eyi-1, hlola umphumela. Uma ukubekezelela kukuhle, khona-ke ungandisa ukusetshenziswa kwekhukhamba elilodwa ngosuku.
Inyama yekhukhamba ihlikihlwa ku-grater enhle noma ephakathi ukuze ifakwe kahle, kepha futhi ingasikwa ibe yizicucu ezincane. Ifakwa kwisaladi yemifino noma isetshenziswe njengesitsha esiseduze senyama. Kungaba umqondo omuhle ukuthi udle ikhukhamba elilodwa ngesikhathi sesidlo sasemini, unciphise isidlo neminye imifino emisha (i-pepper bell, izaqathe, i-beet).
Kubalulekile! Khetha ukhukhamba owenziwe ekhaya otshaliwe ngaphandle kwesithuthukisi sokukhula, ama-pesticides kanye namanye umanyolo wamakhemikhali. Njengoba le mifino inamanzi amaningi ekwakhiweni kwayo, wonke amakhemikhali aqongelela hhayi kuphela ikhasi, kodwa futhi “amuncwa” epulpiti. Ukusetshenziswa kwamakhukhamba anjalo kuthinta kabi i-pancreas, ebhebhethekisa inkambo ye-pancreatitis kuphela.
Ukhukhamba enosawoti futhi wagcotshwa pancreatitis. Sonke siyawathanda umsebenzi wesikole. Ithebula lethu lemikhosi alikwenzi ngaphandle kwekhukhamba oluhlotshisiwe noma lukhava. Kodwa-ke, iziguli ezine-pancreatitis kufanele zilahle lezi zitsha. Ekubunjweni kwawo aqukethe izinto ezinolaka ezicasulayo ulwelwesi lwe-mucous lomgudu wokugaya ukudla (i-citric acid, ugarlic, iqabunga le-bay, upelepele, uviniga). Ukusetshenziswa kwalezi zitsha kuzodala ukuhlaselwa kobuhlungu noma kubangele okunye ukwanda kwe-pancreatitis engapheli.
Ingabe kufanelekile ukudla ukhukhamba
Imvamisa le ngxenye yemenyu inomphumela omuhle kwezempilo:
ngenxa yokuqukethwe kwamanzi amaningi (95%), ubuthi buyasuswa emzimbeni,
ukusetshenziswa njalo kuvusa umgudu wokugaya ukudla,
izici zokwakheka kwe-enzymatic zifaka isandla ekutholweni kwezitsha zenyama,
Ujusi wekhukhamba uzosiza ukuqeda ezinye izinhlobo zesifo se-gallstone, esivimbela ukuhlaselwa yi-pancreatitis.
Kodwa iziguli kufanele zifake ngamabomu ingxenye ethile ekudleni, futhi esigabeni esibuhlungu, ziyilahle ngokuphelele. Ngalesi sikhathi, kuyafakwa izidingo zokudla okunempilo, kuze kube yindlala. Ezinsukwini zokuqala ngemuva kokuhlaselwa, isiguli singabekwa izinqubo ezihlose ukucindezela umsebenzi we-enzymatic, futhi izinto ezizuzisayo zingeniswa emzimbeni ngokufakwa emzimbeni.
Ezinsukwini ezingama-25, ukwenqatshwa kwamakhukhamba kufanele kube kuqedile, ngoba isobho elinamanzi nelinowuketshezi lizoba yisisekelo sokondleka. Ungbuyela ekusetshenzisweni kwemifino ezinyangeni ezimbalwa, futhi izingxenye kuzodingeka zikhawulelwe.
Uma uthatha isinqumo sokwethula ukhukhamba omusha nge-pancreatitis ekudleni, naka ikhwalithi: kufanele ivuthwe, mhlawumbe ikhule ekhaya, ikhule ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali. Akunconywa ukuthenga izithelo zokuqala, ngoba zitholakala ngokunisela kakhulu ngama-nitrate.
Njengoba ikhasi licebile ngefreyimu ehlanganisiwe, kungakuhle ukuwukhiphe, bese ugaya umkhiqizo ku-puree obuyisela kahle ulwelwesi lwe-mucous lwesitho esivuthiwe. Udinga ukudla isidlo ngemali encane, ngoba amanzi afinyelela kubuthi nangamsoco. Isithelo esingu-1 esincane noma isilinganiso esingu-½ sanele ukulungiselela ingxenye evunyelwe, futhi ungayigcini: ukuhlala isikhathi eside esiqandisini kuzoba yingozi yezindawo zamazambane abunjiwe.
Ukudla ukhukhamba ngamanani amakhulu kuvunyelwe ngokusho kwemithi kadokotela, ngoba ngezindlela ezingapheli ukudla okunjalo kungasebenza. Isimo esibalulekile sizoba nobungane bemvelo, ngoba imvelo yansuku zonke ingafinyelela amakhilogremu ambalwa, futhi lapho kukhona ama-nitrate, umzimba uzophendula ngobuhlungu.
Okubalulekile: isithako singezwa ekudleni kuphela ngemvume kadokotela.
Imvamisa, odokotela babiza utamatisi ewusizo ezicini ezilandelayo:
bakhulisa ukudla futhi bavuse ukugaya,
ukusetshenziswa njalo kuzosusa amabhaktheriya ayingozi aphula i-microflora yamathumbu,
i-fiber equkethwe emzimbeni isusa i-cholesterol, inciphisa ubungozi be-pancreatitis.
Ngefomu elibi nokusebenzisa utamatisi, udinga ukulinda, ngoba ngemuva kokuphela kokuhlaselwa amasonto ambalwa kufanele kudlule. Uma lesi sifo siba buthaka, khona-ke uhlu lokudla okuvunyelwe luyandiswa, kepha utamatisi nge-pancreatitis ungadliwa kuphela uma zonke izimo zihlangabezana:
kuphekwe kubhakwe noma kuphekwe ebhuthini eliphindwe kabili,
ikhasi ngaphambi kokusetshenziswa, emva kwalokho umkhiqizo uchotshoziwe kumazambane abunjiwe.
Umthamo we-servings ukhuphuka kancane kancane, futhi ekudleni kokuqala, i-1 tbsp yanele. l Uma umzimba ungaphenduli nge-exacerbation, khona-ke okujwayelekile kwansuku zonke kungafinyelela kumaphakathi wesibeletho ngosuku, kepha le ngxenye yemenyu akufanele ihlukunyezwe.
Ukuze isifiso sokudla utamatisi singakuvusi ukuhlaselwa okusha, kufanele ulandele imithetho:
Ama-pancreas azwelayo azophendula uma imifino iphathwe ngamakhemikhali. Lapho isiguli noma izihlobo zinethuba lokuvakashela lo muzi, izithelo zendawo ziyojabulisa ngosizo, kodwa kufanelekile isikhathi ukuzithenga esitolo.
Ukunameka i-ketchup notamatisi utamatisi kuvinjelwe.
Izinhlobo ezingavuthiwe ezivuthiwe noma eziluhlaza kufanele zilahlwe, ngoba zizolimaza ngisho nangemva kokulashwa kokushisa.
Ijusi yetamatisi ngaphandle kosawoti (200 ml ngosuku) ingafakwa ohlelweni lokudla.
Utamatisi o-Braised ngokufakwa kwezaqathi noma i-zucchini kuzoba wusizo.
Lapho lesi sifo sixolelwa isikhathi eside, kuvunyelwe ukusebenzisa unama utamatisi owenziwe ekhaya lapho upheka. Ukuze wenze lokhu, utamatisi ovuthiwe udluliswa ngejusi, ngaphambili lisikiwe, bese uketshezi oluphumayo lubilisiwe phezu kokushisa okuphansi. Ngemuva kwamahora angama-5, iyoqina, bese isithako esingenabungozi sezinongo silungile.
Okubalulekile: ukwethula utamatisi kumenyu kufanele kube ngamabomu futhi kubuye kancane kancane, kepha uma ulandela izincomo, kunomthelela omuhle esizweni esithintekile futhi ukhulule ukuvuvukala kolwelwesi lwe-mucous.
Faka ukhukhamba ekudleni
Kungenzeka yini ukudla utamatisi nge-pancreatitis noma ujabulele ukhukhamba uma kuhanjiswa ngendlela enosawoti noma ekheniwe? Odokotela banikeza impendulo engemihle, ngoba lapho kupheka kuleli cala, kusetshenziswa izingxenye ezilandelayo:
uviniga ne-citric acid,
iqabunga le-bay, ugarlic nezinye izinongo.
Ukulimala okungenzeka kuzoba kuhle kumuntu ophilile, ngoba ama-pancreas azokwandisa ngokushesha umsebenzi we-enzymatic. Noma onesifo esingamahlalakhona, lokhu kuzodala ukuhlasela, ngakho-ke ukwenqatshwa kokuphathwa okunjalo kufanele kube okuphelele. Ngaphezu kwalokho, izitsha zincishwa izithako eziwusizo, ngoba izinto ezibalulekile ziyanyamalala lapho usawoti.
Ngabe isiguli esine-pancreatitis singadla ukhukhamba omusha notamatisi? Impendulo incike ohlotsheni lwesifo, ngoba esigabeni esibuhlungu le mikhiqizo ayifakwa kwimenyu. Uma ungasinaki izeluleko zikadokotela futhi ungasusi izakhi ekudleni, khona-ke ama-enzyme angena esigabeni esisebenzayo futhi alulaze izicubu, futhi ukubanjwa ngamandla kuya njalo. Esimweni esingamahlalakhona, isiguli sivunyelwe ukudla utamatisi namakhukhamba ngamanani amancane, senze iziyalo zezeluleko ngokulungiswa kwazo.
Ngakho-ke, ngesikhathi esibi sesifo, izitsha eziningi ezahlukahlukene azihlanganisiwe ekudleni. Konke ukudla okunamafutha, okuthosiwe kanye nezinongo kunqatshelwe ngokuphelele. Imifino emisha nayo ilinganiselwe.
Ngemuva kwenkathi yesifo esibi, ehambisana nokubonakala kwezimpawu ezimbi, inyamalala, kuvunyelwe ukufakwa kancane kancane imifino kumenyu. Kodwa-ke, ekuqaleni ungadla kuphela lezo eziphathwe ukushisa. Izithelo ezintsha zingavusela ubuhlungu esiswini, futhi zibhebhethekise isimo. Ngesikhathi esibi se-pancreatitis, noma yimiphi imifino, kufaka phakathi ukhukhamba notamatisi, kungcono ukungafaki. Lokhu kuyadingeka ukuze "uthulule" ama-pancreas, futhi unikeze umzimba isikhathi sokululama.
Kungcono ukwethula imifino emisha ekudleni ngemuva kokuqhakaza kwesifo okuningana ngaphambi kwezinsuku ezingama-7-7 ngemuva kokukhula kwenempilo. Ukudla okuqinile kakhulu ngesikhathi sokuqhakaza kuchazwe ezinsukwini ezintathu zokuqala ngemuva kokuqala kwezimpawu. Ngemuva kwalesi sikhathi, ukudla kuyakhula kancane kancane.
Ukudla kwe-pancreatitis kuhloswe ukukuqeda ekudleni konke ukudla okungadala ukubukeka kokuqhamuka okusha kwalesi sifo. Imifino ye-pancreatitis engapheli ingadliwa, noma kunjalo, ngokuya ngemithetho eminingana.
Ngakho-ke, akufanele udle ukhukhamba ngamanani amakhulu. Ngemuva kokunye ukwanda kwesifo, le mifino kufanele ingeniswe emenyu kancane kancane. Umthamo wokuqala ovunyelwe awudluli isipuni.
Ngemuva kokwethula ukhukhamba kwimenyu, kuyadingeka ukuhlola isimo esijwayelekile. Uma kungekho zimpawu ezimbi ezivelile, khona-ke inani lemifino lingandiswa kancane kancane. Akufanelekile ukuthi udle ngaphezu kwama-100-150 amagremu wamakhukhamba amasha ngosuku kubantu abahlushwa i-pancreatitis engapheli, ngoba lokhu kungaholela ekubukekeni kwezimpawu eziletha ukungajabuli.
Utamatisi nge-pancreatitis engamahlalakhona kungcono ukungadli nsuku zonke. Ama-acid aqukethe kuwo angavusa ukubukeka kokuhlaselwa kobuhlungu esiswini.
Kungcono ukudla utamatisi ngaphandle kwe-peel.
Isifo sokuqina kwemithambo yegazi
I-Rosart: imiyalo yokusebenzisa, izinkomba, ukubuyekezwa kanye nama-analogues
Garlic: izinzuzo nemiphumela emibi yesifo sikashukela, senhliziyo, nesibindi
I-Diabetesalong: Imiyalo yokusebenzisa, intengo, ukubuyekezwa, ama-analogues
Ukwakheka kwama-pancreas womuntu - indawo, i-anatomy, umsebenzi
Ikhekhe labashukela 2 izinhlobo zokupheka
Ukwelashwa kwe-pancreatic lipomatosis ngemithi yesintu
Kuyini i-pancreatic lipomatosis - i-prognosis, ukubuyekezwa nokuthi ungaselapha kanjani i-Pancreatic lipomatosis yisifo esibi, esihambisana nezinguquko ezingenakuphikwa kulesi sitho ngokufakwa kwesakhiwo saso nezicubu ze-adipose. ...
Usuku lwesifo sikashukela
Uhlobo 2 sikashukela: ukwelashwa
Impilo enesifo sikashukelaAmamitha kashukela egaziIzinhlobo NezinhloboIngcindeziI-Dummy DiabetesicsUkudla ngesifo sikashukelaUkwelashwa nokuvimbelaIzizathuIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniAmanyikwe
Umthetho omusha wokuKhubazeka
Yini sucrose: kuchazwa kwento, okuqukethwe ekudleni
Ungayisebenzisa kanjani iNovoMix 30 Penfill Suspension
I-Mexicoidol yesifo sikashukela sohlobo 2: usisebenzisa kanjani isidakamizwa?
I-Captopril: imiyalo esetshenziswayo, izinkomba, imithamo kanye nama-analogues